खारेजी गर्नुपर्र्नेे विधेयक के को अंश सच्याउने ? कपटकारी सरकार माइतीघरको हेक्का रहोस् : खगेन्द्र संग्रौला | सु-सुचित नेपालको चित्र
खारेजी गर्नुपर्र्नेे विधेयक के को अंश सच्याउने ? कपटकारी सरकार माइतीघरको हेक्का रहोस् : खगेन्द्र संग्रौला
देशको राजनीतिक परिस्थितिको खरो रुपमा ब्यङ्ग गर्दै आएका राजनीति विश्लेषक एवम टिप्पणीकार खगेन्द्र संग्रौलाले वर्तमान सरकारको मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधि विधेयक सच्याउने कुरामा थोकमा हक हरण गरेर अंश सच्याउने जालसाजी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत स्टाटस पोष्ट गर्दै संग्रौलाले भनेका छन् । “अनुपम ओली सरकारका विरलाकोटी प्रवक्ता गोकुलधूपको मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधि विधेयक सच्याउने अमृतवाणी सुनियो । यो थोकमा हक हरण गरेर अंश सच्याउने जालसाजी हो” ।
खारेजी नै गर्नुपर्ने विवादित विधेयकहरु सच्याउने नाममा कपटकारी सरकारले जनताहरुलाई भ्रममा नपारी माइतीघरको हेक्का राख्न चेतावनी दिए । उनले भनेका छन् ।” गर्नुपर्ने त यी हक हरणकारी विधेयकको केवल खारेजी हो, के को अंश सच्याउने ? कपटकारी सरकार माइतीघरको हेक्का रहोस् ” ।